Fanentanana avy @ mpitandrina Randrianarisoa Alain, 15 mey 2020 – FJKM Ambavahadimitafo Fanentanana avy @ mpitandrina Randrianarisoa Alain, 15 mey 2020 |
Fanentanana avy @ mpitandrina Randrianarisoa Alain, 15 mey 2020
Publié le 17 mai 2020 à 01:05
« Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika » (II Tim 1 : 8)
Ambavahadimitafo, 15 Mai 2020
Ho an’ny mpianakavy amin’ny finoana manerana izao tontolo izao,
indrindra ny eto AMBAVAHADIMITAFO.
Ry havako, ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa.
1) Mampahery sy mivavaka ho antsika rehetra na aiza no misy antsika na aiza, noho ny vokatry ny tsimokaretina COVID-19. « Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra Izy » (Salamo 46 : 1)
2) Fantantsika rehetra fa tena tsy salama Ramatoa Fara RANAIVOSON ; tena mila ny fitondrantsika am-bavaka ny fitsaboana azy. Ary tena zava-dehibe amin’ny Tompo Jesoa ny fanohanantsika koa ara-bola ny fitsaboana izany mpanompon’Andriamanitra izany.
«Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny Anarany » (Hebreo 6 :10).
3) Isaorana ny Tompo fa madiva ho vita ny « Toeram-pidiovana » eto amintsika Ambavahadimitafo. Mankasitraka ireo nandray anjara ary mbola manentana antsika tsy nahatanteraka izany.
Ny Alahady 17 mai sy ny Pentekosta 31 Mai 2020 izao dia hisy fitondrana am-bavaka manokana izany asan’Andriamanitra izany sy fiarahantsika mientana amin’ny alalan’ny RAKITRA MANOKANA.
Ho anao tsy ho afaka amin’ireo fotoana ireo dia afaka manontany ny Tomponandraikitry ny « site web »n’ny Fiangonana amin’izay ahazoanao manefa ny anjaranao.
« Fa Jehovah Andriamanitrao mandeha eo afovoan’ny tobinao hamonjy anao… Ka dia ho masina ny tobinao, mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao Izy ka tsy hiala aminao ». (Deotornomia 23 :15).
Amin’ny anaran’ny Fiangonana manontolo.